Ity no emulator Switch voalohany ho an'ny Android: Azo lalaovina! | Androidsis
Nerea Pereira | | Emulators, Lalao Android
Efa an-taonany maro izahay no niandry olona handefa a emulator ho an'ny Nintendo Switch izay afaka mandeha amin'ny Android. Dingana tsikelikely no nalaina tamin'ity lalana ity, toy ny tamin'ny fotoana nametrahana ny Android tao amin'ny console malaza an'ny goavambe fialamboly japoney.
Ankehitriny, azontsika atao ihany ny milaza amin'ny farany fa tonga io fotoana io: efa ananantsika ny emulator Switch voalohany ho an'ny Android. Ary mitandrema, miasa tanteraka izy io, na dia misy tsipiriany roa tsy tianao aza.
Mila finday mahery vaika ianao hampiasa an'ity emulator Switch ity
Hanombohana azy dia mila finday tena matanjaka ianao hampandehanana azy. Amin'izany fomba izany, na ny smartphone-nao dia manana processeur Qualcomm Snapdragon 855 na 865, na afaka manadino ny fampiasana ity emulator ity ianao. Ary ny tena olana dia ny fiandohana mampiahiahy an'ity seranana ity.
Ny ankamaroany satria, raha ny fijeriny azy dia manana kaody kely nangalarina izy io a emulator ho an'ny Nintendo Switch izay miasa amin'ny PC. Hatreto, tsy ho faran'izao tontolo izao koa izany, satria nilaza izy fa loharano misokatra ny emulator, ka tsy tena nangalarin'izy ireo ilay kaody. Saingy, rehefa ataon'izy ireo ity emulator ho an'ny loharano mihidy Android ity (ka tsy misy olona afaka miditra ao aminy) dia manomboka mampiahiahy izany.
Ny teboka ratsy faharoa dia avy amin'ny filazan'izy ireo fa studio monina any Etazonia izy ireo. Saingy amin'ny lalao sinoa ny lalao ary ny sasany nadika amin'ny teny anglisy miaraka amina lesoka isan-karazany, ary mazava fa tsy orinasa amerikana izy, lavitra azy io. Ary, ny gilasy amin'ny mofomamy dia apetraky ny fepetra faharoa hahafahana mampiasa ity emulator Switch ho an'ny Android ity: mila mividy mpanara-maso manokana izay mitentina $ 99 ianao.
Andao, inona no zava-bitany alaivo tahaka ny Nintendo Switch amin'ny Android, Saingy mila mandoa $ 100 ho an'ny mpanara-maso ianao, nanampy ny zava-misy fa nangalatra kaody izy ireo hamoronana ny vahaolana manokana. Hatoky ny fiaviana toy izany ve ianao? Manoro hevitra anao izahay mba tsy hilalao azy io ary hiandry, satria mety hahagaga anao ny sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Efa misy emulator Nintendo Switch ho an'ny Android sy fampiasa. Na dia manana fandrika aza izy
Mihatsara ny fakan-tsarin'i Oppo Reno 4 Pro noho ny fanavaozana vaovao